Nei uchinwa apuro cider vhiniga neuchi hwekuremu | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Iyo inonzi inonzi vhiniga yekudya, apo slimming inokurudzirwa kunwa apuro cider vhiniga neuchi, vazhinji vanogunun'una.
Tichaedza kubvisa kupokana kwako uye nekutsanangura chikonzero nei chinwiwa chakanyatsogadzirirwa chinoshanda, chichibatsira kwete kungotapira, asiwo kuporesa muviri.
Kurera huremu pane apuro inoruma nehuchi, uye kupi iyo acidization yemuviri
Kurera uremu nezvirwere zvakasiyana siyana zvinomuka nekuda kwevhiringidzike acid-base zviyero mumuviri. Kwemakore, inowedzera kune yakawedzera acidity.
Kunyanya nekuda kwekuti isu hatidye zvisina kukodzera uye zvine hutano chikafu. Semhedzisiro, ropa acidides, toxin uye toxin kuunganidzira, anodzivirira ekudzivirira, uye metabolism inoderera. Munzvimbo ine acidic yemuviri inogara yakakwira cholesterol.
Zvishoma nezvishoma, munhu anowana chirwere chisingaperi, uremu hunowedzera, uye panguva imwechete, simba rinoderera uye kushungurudzika kunooneka.
Kuti udzivise izvi, iwe unofanirwa kudya zvakawanda alkaline zvekudya, kunwa mvura yakachena yakawanda, kugara uchenesa muviri, uye kurovedza muviri.
Izvo zvakanaka zveapuro cider vhiniga neuchi kune uremu uye kwete chete
Apple cider vhiniga neuchi chinwiwa icho, zvinopesana neshure yekudya kwakakodzera, zvishoma nezvishoma inovandudza pH yematumbo neropa. Iko kunwa kunoshandura acidity, inogadzira nharaunda isina kunaka kune hutachiona.
Semhedzisiro, kugaya uye metabolism inova yakanaka, kusadzivirirwa kune simba uye hutano huri nani.
Apple cider vhiniga neuchi - inorayirwa kuitora mangwanani, inofanira kuva tsika yakasungirwa, segirazi remvura padumbu risina chinhu.
Maitiro aya haabatsiri kwete chete pakurasikirwa uremu, asiwo ezvirwere zvakadaro uye pathologies:
kukwira kweropa uye dambudziko rehosha;
arthritis uye arthrosis;
kupisa muviri zvakanyanya uye fivha;
acne uye acne;
huwandu hwakanyanya hwe cholesterol yakaipa.
Ungabika sei apple cider vhiniga neuchi uye utore uremu
Mangwanani ega ega munodurura girazi remvura yekunwa umo munomutsa 1 Art. spoonful yeapuro cider vhiniga uye 1 Art. spoonful yeuchi. Zvese zvigadzirwa zvinofanirwa kunge zviri zvemhando yepamusoro uye zvakasikwa.
Zvakakodzera, apuro cider vhiniga yehuremu inofanirwa kuve yakagadzirirwa yakazvimirira. Heano maitiro ari nyore kwauri.
maapuro apakati nepakati - 4 pcs;
shuga jecha - 4 tsp;
Maitiro ekuita chinwiwa chinonamira - yekubheka
1. Geza michero uye kuisa mukati.
2. Zvino cheka maapuro kuita zvidimbu zvidiki.
3. Vadururire mumudziyo usina girazi (chirongo) cheimwe kana imwe nehafu.
4. Kuyera 1 girazi remvura uye kumutsa mukati mayo chikamu chose cheshuga.
5. Chinjana kune ndiro neapuro uye wedzera imwe mvura kuitira kuti zvidimbu zvinyatsofukidzwa.
6. Putira chirongo neachoze kana kuti parchment, bhandeji.
7. Ramba uchivirirwa kwemazuva 14-20 munzvimbo inodziya.
8. Mushure mekupinda nguva yapfuura, svina iyo acidic mvura kubva muchirongo - mubhodhoro regirazi neinomira, bvisa iyo.
9. Isa vhiniga udzokere mukati mekupisa, watoita usina magira apuro. Bata kune imwe 4 mavhiki, nguva nenguva uchizunza chinwiwa kana kusimudzira netsvimbo yakachena.
Iye zvino unogona kuyedza yakagadzirira yakagadzirwa apuro cider vhiniga, kana asidhi yayo inokodzera iwe, wobva watanga kuishandisa nechinangwa chekurasikirwa uremu uye kupora.
Contraindication yekurasikirwa uremu neapuro masharubu
Kufanana chero mushonga, apuro cider vhiniga neuchi ine contraindication. Kuti urege kukonzera zvakanyanya kukuvadza kumuviri wako, usati watora chinwiwa, iwe unofanirwa kuongororwa zvishoma uye nekuwana chiremba.
Saka, zvinorambidzwa kunwa apuro cider vhiniga neuchi hwegastric ulcer uye gastritis, ye-enterocolitis, hepatitis, pancreatitis, kupera simba, panguva yekuzvitakura, muhucheche uye kuyaruka.
Kana mushure mekutanga kwechinwiwa pane zvisinga fadzi zvinonzwisisika mudumbu, ipapo iwe unofanirwa kutapudza chikamu chemushonga uye woramba kuchishandisa padumbu risina chinhu. Kana zviratidzo zvisingafadzi zvikasaenda, iwe unofanirwa kusiira mushonga, zvinoreva kuti hazvikodzere.
sei kunwa apuro cider vhiniga yehuremu? Uye zvakadaro, ichokwadi here kuti zvinobatsira kudzikisira uremu?
Ndiudze kuti ndinwe sei apple cider vhiniga?
Nzira yekumwa sei apple cider vhiniga kuti uderedze uremu? Uye zvinokanganisa sei chiropa?
Nei uchinwa mvura yakawanda uchideredza uremu?
Mibvunzo ye39 mu database yakagadzirwa mu 0,410 masekondi.